Blog Okwu Radio WordPress Sidebar
Anyị enweela ihe ngosi redio anyị na-aga ọnwa ole na ole wee gaa n'ihu na-ewuli nnukwu ekele na-eso Blog Okwu Radio. Ọ dịbeghị anya, ndị enyi Erik Deckers na Kyle Nwachukwu nọ na-atụle akwụkwọ ọhụrụ ha Mbọnyere Onwe Gị: Etu esi eji Social Media echepụta ma ọ bụ chegharịa onwe gị.
Anyị nwere afọ ojuju na Blog Talk Radio. Ọ bụ nnukwu ọrụ dị mfe iji ma ọ dịghị achọ nkà ọ bụla pụrụ iche iji bido. Anyị nwere Igwe okwu Podcasting, ma ọrụ ahụ na-enyekwa gị ohere ịpị. N'izu a anyị nwere ụfọdụ nsogbu na ịntanetị anyị ka anyị jiri igwe okwu okwu m na ekwentị m iji mee ihe ngosi ahụ.
Enweelarị m ogwe osisi iji gosipụta ihe ngosi redio kachasị ọhụrụ, mana achọrọ m ijikọta ihe igwe egwu nke mere na ndị ọbịa nwere ike igwu ihe omume ahụ ozugbo site na sidebar. N'ime nweta_feed akaghị na-agụ ndepụta ma gosipụta ya, ị ga-agbakwunye snippet koodu iji jikọta faịlụ mp3 site na Blog Talk Radio.
Nke a ga - agbakwunye ụzọ dị egwu na ihe ọkpụkpọ mp3 ozugbo n'ime ihe nkwado square na - enyefe mgbanwe na ọrụ insert_audio_player:
[ọdịyo: nweta_permalink (); ?>. mp3 | obosara = 100%]
Nke a na-eme ka ihe ọkpụkpọ ọdịyo na faịlụ ụda nke akwadoro na Blog Talk Radio. Ọ bụghị ihe ọjọọ na otu akara nke koodu!
Ee, igwe okwu Yeti agafeela ihe a tụrụ anya ya. Okwu mma ọ bụla
anọwo na usoro ntughari na BlogTalkRadio - ma anyị nwere ike
kwalite akaụntụ anyị n'oge adịghị anya ka ịhụ ma nke ahụ ọ ga-elekọta nke ahụ. Igwe okwu ahụ
maa na-adịghị wuru maka njem, ma anya mara mma ufiop oche
na tebụl. 🙂 Enwere m obi ụtọ na ịzụrụ - yana ọnụ ahịa ahụ.